Yesu Mpae a Ɛtwa To ( Yohane 17) | Yesu Asetena
SƐ YƐHU ONYANKOPƆN NE NE BA NO A, NEA YƐBƐNYA
BAAKOYƐ A ASUAFO NO NE YEHOWA NE YESU BƐNYA
Ná Yesu dɔ asomafo no paa, enti ɔrebɛkɔ yi, na ɔreboa wɔn ama wɔada wɔn ho so. Afei ɔmaa n’ani so hwɛɛ soro bɔɔ n’Agya mpae sɛ: “Hyɛ wo ba no animuonyam, na wo ba no nso ahyɛ wo animuonyam, sɛdeɛ woama no honam nyinaa so tumi, sɛ dodoɔ a wode ama no nyinaa no, ɔmma wɔn daa nkwa.”—Yohane 17:1, 2.
Yɛtumi hu sɛ na biribiara nhia Yesu sɛ Onyankopɔn a ɔbɛhyɛ no anuonyam. Nanso ɔkaa daa nkwa nso ho asɛm, na na ɛyɛ anidaso kɛse paa! Sɛ wɔde “honam nyinaa so tumi” hyɛ Yesu nsa a, ɛbɛma nnipa nyinaa anya n’agyede afɔre no so mfaso. Nanso, ɛnyɛ obiara na ɔbɛnya so mfaso. Adɛn nti? Efisɛ sɛ obi bɛnya Yesu afɔre no so mfaso a, gye sɛ ɔde Yesu asɛm a ɛdi so yi yɛ adwuma. Ɔkaa sɛ: “Yei ne daa nkwa, sɛ wɔbɛhu wo, nokorɛ Nyankopɔn koro pɛ no, yie, ne deɛ wosomaa no no, Yesu Kristo.”—Yohane 17:3.
Ɛsɛ sɛ obi tumi hu Agya no ne Ɔba no yie na ɔbɛn wɔn paa. Ɛsɛ sɛ ɔne wɔn adwene hyia wɔ biribiara mu. Afei nso ɛsɛ sɛ ɔyere ne ho suasua wɔn na ɔnya wɔn suban fɛfɛ no bi. Ade foforo nso a ɛsɛ sɛ ɔhu ne sɛ, anuonyam a yɛbɛhyɛ Onyankopɔn no, ɛho hia koraa sen daa nkwa a nnipa bɛnya. Ɛno ne ade a afei Yesu kaa ho asɛm. Ɔkaa sɛ:
“Mawie adwuma a wode ama me sɛ menyɛ no de ahyɛ wo animuonyam wɔ asase so. Enti afei, Agya, fa animuonyam a na mewɔ wɔ wo nkyɛn ansa na wiase reba no hyɛ me animuonyam wo ara wo nkyɛn.” (Yohane 17:4, 5) Ná Yesu resrɛ n’Agya sɛ ɔnnyane no nkɔ soro na ama ne nsa aka anuonyam a na ɔwɔ dada no.
Nanso na Yesu werɛ mfirii adwuma a ɔda so wɔ yɛ no. Ɔkaa wɔ mpae no mu sɛ: “Mada wo din adi akyerɛ nnipa a woyii wɔn firii wiase maa me no. Ná wɔyɛ wo dea na wode wɔn maa me, na wɔadi w’asɛm so.” (Yohane 17:6) Ɛnyɛ Yesu ano kɛkɛ na ɔde bɔɔ Onyankopɔn din Yehowa no wɔ n’asɛnka adwuma mu. Mmom ɔboaa asomafo no maa wɔtee din no ase, kyerɛ sɛ, wɔhuu Onyankopɔn suban ne sɛnea ɔne nnipa yɛ.
Ná asomafo no abɛhu Yehowa ne dwuma a ne Ba Yesu di, na na wɔahu Yesu nkyerɛkyerɛ nso. Yesu kaa no ahobrɛase mu sɛ: “Nsɛm a wode maa me no, mede ama wɔn, na wɔagye, na wɔabɛhunu ampa sɛ mebaa sɛ wo nanmusini, na wɔagye adi sɛ wo na wosomaa me.”—Yohane 17:8.
Afei Yesu kyerɛɛ nsonsonoe a ɛda n’akyidifo ne wiase no ntam. Ɔkaa sɛ: “Mesrɛ ma wɔn; mensrɛ mma wiase, na mmom wɔn a wode wɔn ama me no; ɛfiri sɛ wɔyɛ wo dea . . . Agya Kronkron, wo ara wo din a wode ama me nti hwɛ wɔn so na wɔayɛ baako sɛdeɛ yɛn nso yɛyɛ baako no. . . . Makora wɔn so, na wɔn mu baako mpo nsɛeeɛ gye ɔsɛeɛ ba no.” Ná Yesu reka Yuda ho asɛm efisɛ na ɔnam kwan so rekɔyi Yesu ama.—Yohane 17:9-12.
Yesu toaa so sɛ: “Wiase atan wɔn.” Ɔsan kaa sɛ: “Mensrɛ sɛ yi wɔn firi wiase, na mmom mesrɛ sɛ hwɛ wɔn so ɛsiane ɔbɔnefoɔ no nti. Wɔnyɛ wiase no fã sɛdeɛ menyɛ wiase no fã no.” (Yohane 17:14-16) Asomafo no ne asuafo a aka no, na wɔte Satan wiase mu, nanso na ɛsɛ sɛ wɔtwe wɔn ho fi wiase ne emu nneɛma a ɛnyɛ no ho. Ná wɔbɛyɛ dɛn ayɛ saa?
Ná ɛsɛ sɛ wɔde Hebri Kyerɛwnsɛm no ne Yesu nkyerɛkyerɛ bɔ wɔn bra na ama wɔayɛ kronkron ate wɔn ho asom Onyankopɔn. Yesu kaa wɔ mpae no mu sɛ: “Fa nokorɛ no yɛ wɔn kronkron; w’asɛm yɛ nokorɛ.” (Yohane 17:17) Akyiri yi, honhom kaa asomafo no bi maa wɔkyerɛw nwoma bi a abɛka “nokorɛ” a ɛma nnipa yɛ kronkron no ho.
Nanso ɛnyɛ asomafo no nkoa ara na wɔgyee “nokorɛ no” toom; ebinom nso bɛkaa ho. Enti Yesu toaa mpae no so sɛ: “Ɛnyɛ yeinom [kyerɛ sɛ, wɔn a wɔwɔ ne nkyɛn no] nko ara nti na mesrɛ, na mmom wɔn a wɔnam wɔn asɛm so gye me die no nso.” Dɛn na Yesu srɛ maa wɔn nyinaa? Ɔsrɛɛ sɛ: “Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nyinaa bɛyɛ baako, sɛdeɛ wo, Agya no, wowɔ me mu na me nso mewɔ wo mu no, na wɔn nso ne yɛn ayɛ baako.” (Yohane 17:20, 21) Yesu ne Agya no mmɔ mu nyɛ onipa baako. Mmom biribiara mu wɔn adwene hyia. Yesu srɛɛ sɛ n’akyidifo nyinaa ne wɔn bɛnya saa baakoyɛ no bi.
Ná Yesu adi kan aka akyerɛ Petro ne asomafo a aka no sɛ ɔrekɔ akɔsiesie baabi ama wɔn wɔ soro. (Yohane 14:2, 3) Yesu san baa saa asɛm no so wɔ mpae no mu sɛ: “Agya, deɛ wode ama me no deɛ, mepɛ sɛ anka baabi a mewɔ no, wɔn nso bɛka me ho, na wɔahunu animuonyam a wode ama me no, ɛfiri sɛ na wodɔ me ansa na wɔrehyɛ wiase ase.” (Yohane 17:24) Enti ɔsii so dua sɛ Onyankopɔn Dɔba koro pɛ a ɔbaa asase so bɛyɛɛ Yesu Kristo no, Onyankopɔn fi dɔɔ no nyɛ nnɛ; Adam ne Hawa nnya nwoo mma mpo, na ɔdɔ no.
Bere a Yesu mpae no reba awiei no, ɔsan kaa n’Agya din ne ɔdɔ a Onyankopɔn wɔ ma asomafo no ne afoforo a akyiri yi, wɔbɛgye “nokorɛ no” atom ho asɛm. Ɔkaa sɛ: “Mama wɔahunu wo din na mɛma wɔahunu, na ɔdɔ a wode dɔɔ me no atena wɔn mu na matena wɔn mu.”—Yohane 17:26.
Yɛka sɛ obi ahu Onyankopɔn ne ne Ba no a, dɛn na ɛkyerɛ?
Akwan bɛn na Yesu faa so daa Onyankopɔn din adi?
Dɛn na ɛma Onyankopɔn, ne Ba no ne nokware asomfo nyinaa yɛ baako?